"Ngiyazi kungenxa silly kodwa mina nje ngephutha format imemori khadi for the Cannon powershot S95. Kuyinto Ikhamera umkami futhi wathatha ezinye izithombe izingane zethu ngaphambi. Ikhona yini indlela kungenteka ukubuyisa izithombe kwimemori ekhadini ihlelwe?"
Ngaso sonke isikhathi sihlala do memory card ufometha emva sokulayisha izithombe kwikhompyutha, kodwa ngezinye izikhathi, siyobe enze iphutha elikhulu abakhohlwa ukulingisa le izithombe. Ungase ucabange "Oh akukho, zivuka!". Empeleni basuke namanje bahlale kumemori khadi yakho nje kube engabonakali. I computer kwaphawula endaweni ufake izithombe njengoba ezisebenzisekayo godu, ke lokhu ndawo ingaba kubhalwe phezu by data entsha.
Sebenzisa isofthiwe enamandla futhi professional Isithombe Lokubuyisela kuzokusiza ukuba ngiphinde ngibabone. Wondershare Data Recovery Futhi Wondershare Data Recovery for Mac siyindlela enhle ngawe ukubuyisa izithombe kwimemori ekhadini ihlelwe. Ukwengeza, lolu hlelo uyakwazi alulame amavidyo kanye amafayela alalelwayo kusuka ekhadini le-SD, futhi.
Ungalanda inguqulo kwecala ye Wondershare Photo Lokubuyisela ukuba alulame izithombe manje, scan imemori khadi bese kuqala izithombe etholakele ukuze ahlole zingaki izithombe zakho elahlekile kungenziwa walulama.
First connect your memory card reader to you computer (or insert it into the laptop memory card reader), Run lolu hlelo, and choose “Lost File Recovery”.
Lolu hlelo izoskena imemori khadi bese ukubonisa Chile. Yonke idatha lost, ihlelwa izigaba. Kuqala kubo bese ukhethe ukuthi yini wena ukululama kukhompyutha yakho.
Inothi: Emva ufometha imemori khadi, sicela ungavumi ukukopisha lutho kuwo. Noma it kuyonciphisa amathuba ululama izithombe ususiwe.
Posted on July 29, 2013 December 17, 2014 Umbhali Izigaba alulame idathaAmathegi inkumbulo alulame idatha, alulame izithombe isusiwe ihlelwe yememori card, lokulungisa ihlelwe yememori card
Langaphambilini post Previous: Kanjani I buyisa izithombe zisusiwe ikhadi kwimemori SD
Next post Next: Nendlela Phinda kusulwe Amafayela kusuka iPad